भद्र कसरी हुन र संयुक्त राज्य अमेरिका मा असल बेहोरा छ | USAHello | USAHello
तपाईं कसरी नयाँ देशमा भद्र के हो थाह? विभिन्न संस्कृति फरक तरिकामा व्यवहार. यी 10 सुझाव तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा असल बेहोरा देखाउने.
यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा असल बेहोरा देखाउन केही तरिकाहरू छन्. यी सुझावहरू तपाईं आदर र अमेरिकी गर्न विनम्र हुन मदत गर्नेछ.
1. भन्न “कृपया”
सबैभन्दा अमेरिकी भन्न “कृपया” जब उनि केहि चाहनुहुन्छ. जस्तै, यदि तपाईं एक रेस्टुरेन्ट मा खाना अर्डर छन्, तपाईं भन्न सक्छ “म सूप हुनेछ, कृपया”. तपाईं केहि लागि सोध्न र भन्न छैन भने “कृपया”, अमेरिकी तपाईं अशिष्ट छन् लाग्छ हुनेछ.
2. भन्न “धन्यवाद”
अमेरिकी भन्न “धन्यवाद” धेरै. केही संस्कृति मा, मान्छे मात्र भन्न “धन्यवाद” महत्वपूर्ण घटनाहरू लागि. अमेरिका मा, यो भन्न साधारण छ “धन्यवाद” साना इशाराहरू लागि. जस्तै, तपाईं एक पुस्तक कसैले हात भने, तिनीहरूले धन्यवाद सक्छ. भन्न याद गर्न प्रयास “धन्यवाद,” विशेष गरी मदत वा तपाईंलाई मदत गर्न प्रयास गरिएको छ जो कोहीले गर्न.
3. भन्न “माफ गर्नुहोस्”
अमेरिका पनि भन्न “माफ गर्नुहोस्” अन्य संस्कृतिका मानिसहरू भन्दा बढी. जस्तै, कसैले गल्ति सडक मा तपाईं मा धक्का यदि, तिनीहरूले संग माफी माग्न सक्छ “मलाईं माफ गर्नुहोस्” वा “माफ गर्नुहोस्।” अमेरिका, विशेष गरी अमेरिकी महिला, कहिलेकाहीं शब्द प्रयोग “माफ गर्नुहोस्” तपाईं भयो भन्ने कुरा को लागि दुःख व्यक्त गर्न, तापनि तिनीहरूले घटना संलग्न छैन. जस्तै, तपाईं कसैले बताउन सक्छ तपाईं सप्ताह भन्दा वा मित्र मृत्यु कि बिरामी थिए. दयालु र भद्र हुन, तिनीहरूले प्रतिक्रिया सक्छ, “म दु: खी छु।”
4. आफ्नो मुख गर्दा आफ्नो burp वा खोकी कवर
धेरै अमेरिकी विचार यसलाई अन्य अगाडि शारीरिक शोर गर्न अभद्र. तिनीहरूले ग्याँस पारित गर्न प्रयास, burp, वा सार्वजनिक वा तिनीहरूले थाहा छैन मान्छे अगाडि अन्य शारीरिक शोर बनाउन. तिनीहरूले burp आवश्यक भएमा केही मानिसहरू बाथरूम आफूलाई माफ हुनेछ. तपाईं बदबूदार मजाक वा burp भने, यो भन्न भद्र छ, “मलाईं माफ गर्नुहोस्।”
5. भन्न “नमस्ते” जब तपाईं नयाँ मान्छे भेट्न
जब तपाईं पहिलो पटक कसैलाई भेट्न, अमेरिकी सामान्यतया भन्न, “नमस्कार” वा, “नमस्ते, तपाईँलाई भेटेर खुशी लाग्यो।” के तपाईं संग अरू कसैको छ भने, यो व्यक्तिको परिचय साथै भद्र छ. अर्को समय तपाईं व्यक्ति पूरा, तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ, “तपाईं फेरि हेर्न राम्रो,” वा, “म अन्तिम महिना बैठक सम्झना. तिमीलाई कस्तो छ?”
6. तपाईं आराम महसुस छैन भने हात मिलाउ छैन
तिनीहरूले तपाईंलाई भेट्न गर्दा सबैभन्दा अमेरिका आफ्नो हात मिलाउ हुनेछ. तपाईं असहज महसुस भने, तपाईं आफ्नो हात सधैं सँगै राख्न र आफ्नो टाउको अगाडि दुबला गर्न सक्नुहुन्छ. यो हात मिलाउ गर्न चाहँदैनन् देखाउन भद्र तरिका हो. केही अमेरिकी धेरै तपाईं हात मिलाउ गर्न चाहँदैनन् भन्ने हैरानी हुनेछ तर यो ठीक छ. तपाईं परिवारको पुरुष र महिला बाहिर प्रत्येक अन्य स्पर्श गर्छन् जहाँ एक संस्कृति छन् भने, कि भद्रताका साथ व्याख्या व्यक्ति तपाईं बैठक हो. तपाईंलाई असहज महसुस बनाउन कुराहरू के गर्न आवश्यक छैन.
7. एक खुट्टा टाढा कम्तीमा जब तपाईं कुनै नयाँ कुरा छन् खडा
अमेरिका र अन्य संस्कृतिका मानिसहरू भन्दा तिनीहरूलाई वरिपरि थप व्यक्तिगत स्पेस चाहनुहुन्छ गर्छन. अमेरिकामा, अधिकांश मानिसहरू अलग एक अर्को एउटा खुट्टा बारेमा खडा हुनेछ. एक समूह पनि मान्छे तिनीहरूलाई बीच स्पेस संग खडा. तपाईं बोल्ने गर्दा तिमी कुनै धेरै नजिक खडा यदि, तिनीहरूले तपाईंलाई आक्रामक वा अचाक्ली परिचित भइरहेका छन् लाग्छ सक्छ. तिनीहरूले एक कदम पछि र थोरै आश्चर्य वा अनुमोदन देखाउन सक्छ. अन्य अमेरिका धेरै शारीरिक र तिनीहरूले पहिलो तपाईं देख्न जब तिनीहरूले तपाईंलाई वा अंगालो तपाईं कुरा गर्दै गर्दा आफ्नो हात पकड सक्छ. भनेर असहज बनाउँछ भने, यो चरण फिर्ता गर्न ठीक छ.
8. आँखा मा नजर मानिसहरू तिनीहरूलाई कुरा गर्दा
हामी आफ्नो संस्कृति को महत्वपूर्ण भागहरु कायम गर्न प्रोत्साहन. तर, जब तपाईं कुरा तिनीहरूले आँखा मानिसहरू देख तपाईं अमेरिका मा जीवन अनुकूल गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा छ. अमेरिकी नजरमा नजर मान्छे गर्छन तिनीहरू कुरा गर्दा. तिनीहरूले सम्पूर्ण कुराकानीको लागि नजरमा तपाईं हेर्न सक्छन् - यो बस भाग. कसैले तपाईंलाई वार्ता र यदि तपाईं आँखा तिनीहरूलाई हेर्न छैन, तिनीहरूले तपाईंलाई केहि लुकाउने प्रयास वा secretive भइरहेका छन् लाग्छ सक्छ.
9. लाईनमा उभिनुहोस्
सबैभन्दा अमेरिका एक लाइन मा आफ्नो पालो कुर्न एक युवा उमेर देखि सिकाइएको. त्यसैले, पसलमा तपाईं वा एउटा चलचित्र टिकट किन्न प्रयास भने, तपाईं शायद एक लाइन देख्ने. साधारणतया, मान्छे एक द्वारा एक अप लाइन. कहिलेकाहीं तपाईं कसैले देख्न सक्छ “एक स्थान पकड” अरू कसैले लागि, तर ज्यादातर अमेरिका आफ्नो पालो कुर्न आशा. तपाईं लाइन मा कसैले कट देख्न सक्छ हुनत (तपाईं अगाडि जाने), मान्छे को बहुमत आफ्नो पालो पर्खिने. तपाईं एउटा हवाइजहाज छन् भने यो पनि सत्य हो. मान्छे साधारण को हवाइजहाज छोड्न प्रतीक्षा यसलाई आफ्नो पङ्क्ति पालो नभएसम्म.
10. अन्य मान्छे को लागि ढोका खुला होल्ड
सबैभन्दा अमेरिका एक ढोका खुला तपाईं लागि प्रवेश गर्दा / एक भवन विद्यमान पकड हुनेछ. तपाईं एक मानिस वा एक महिला छन् कि, यो तपाईं पछि व्यक्ति को लागि ढोका पकड भद्र छ.
अमेरिका मा संचार पढ्न
संस्कृति आघात पढ्न
संयुक्त राज्य अमेरिका मा सफल हुन कसरी सिक्न